2012 janvier 21 · La vie d'ici et d'ailleurs (Tritriva)
Archive pour le 21 janvier, 2012
Posté : 21 janvier, 2012 @ 10:52 dans GENERAL, TONONKALO | Pas de commentaires »
Aok’izay fa mahatofoka ny geja sy ny ankaso !
Aok’izay f’efa jambena koa ny saina sy ny maso !
Aok’izay fa hadalana mampivarina an-kady !
Aok’izay fa efa ripaka ny kely sy mafiady !
Aok’izay fa efa ringitra ny ravina nilenoka !
Aok’izay fa mihamavesatra ny ketoky ny heloka !
Aok’izay fa efa drodroka ireo zaza am-behivavy !
Aok’izay fa ny tomady indray no zary toa manavy !
Aok’izay fa tena lentika ny sambo tsy ho tody !
Aok’izay fa tena atenda koa ny atambo, ranomody !
Aok’izay fa mihamaizina ny lanitra eo ambony !
Aok’izay fa sao hianjera tsy ho tafarina intsony !
Aok’izay fa tsy ho zaka anie ny hozona any aoriana !
Aok’izay fa ndrao higoka sy hisotro ny tsy tiana !
Aok’izay fa efa ampy ny andro ratsy…mangatsiaka !
Aok’ izay fa mila havotana… ny tanindrazantsika !
Aok’izay ! Aok’izay !